Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo - Izigidi eziMali
Umxholo welungelo lokushicilela
Zonke iimpawu zorhwebo, iilogo, kunye neempawu zenkonzo ezibonisiweyo zibhalisiwe kunye / okanye zimpawu ezibhalisiweyo zabanini bazo. Ukuvelisa kwakhona ngokupheleleyo okanye nangayiphi na indlela ngaphandle kwemvume ebhaliweyo akuvumelekanga. Onke Amalungelo Agciniwe.
Ingcaciso ebonelelwe kule webhusayithi yenzelwe ulwazi kuphela, ke ngoko, abasebenzisi / iindwendwe akufuneki zenze izigqibo ngokusekwe kuyo. Kuyacetyiswa kakhulu ukuba bonke abasebenzisi bajonge iingcebiso zeengcali ezizimeleyo ngaphambi kokwenza naziphi na izigqibo ezinokuchaphazela ezemali, zokuziphatha okanye zomthetho. Inkampani ayijonganga nakuphi na ukungangqinelani okanye ukungachaneki kulwazi olunikiweyo. Inkampani inokuba okanye ingabinakho ukubonelela ngeenkonzo ezichaziweyo, ngenxa yeso sizathu, iNkampani inoxanduva lokulawula unikezelo lweenkonzo ngokungqinelana nolwalamano lwesivumelwano.
The MillionMaker.com le webhusayithi ibonelelwa “NGOKUNJALO” nangOKUBA "FUMANEKA" ngaphandle kokumelwa okanye ukuvunywa okwenziweyo kwaye ngaphandle kwewaranti yalo naluphi na uhlobo nokuba ichaziwe okanye ayichazwanga, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwiiwaranti ezichaziweyo zomgangatho owonelisayo, ukufaneleka kwinjongo ethile, Ulwaphulo-mthetho, ukuhambelana, ukhuseleko kunye nokuchaneka Nawuphi na nawo onke amatyala anokuvela ekufikeleleni nasekusebenziseni iiwebhusayithi zethu, nokuba kungenxa yokungakhathali, ukwaphula umsebenzi okanye ngenye indlela, ayifakwanga ukuya kuthi ga ngokuvunyelwe ngumthetho.
Umxholo we MillionMaker.com Iwebhusayithi ilungiselelwe ulwazi kuphela kwaye ayisiyongcebiso yezomthetho okanye enye ingcali. Yonke inkathalo efanelekileyo ithathiwe ukuqinisekisa ukuba ulwazi olunikezwe kwiiwebhusayithi zethu luchanekile kwaye luhlaziyiwe, kwaye asinakho ukwamkela uxanduva ngazo naziphi na iziphumo ngenxa yokuxhomekeka okanye kokusebenzisa ulwazi oluqhelekileyo njengoko kuchaziwe ngaphambili. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi yethu ayakhi igqwetha / umcebisi / umcebisi- ubudlelwane nabaxhasi kunye MillionMaker.com, kananjalo oku akwenzi ukuba kufunyanwe ukufumana isemthethweni okanye ezinye iingcebiso ezivela MillionMaker.com. Bonke abasebenzisi beiwebhsayithi zethu, nokuba abasebenzisi bangabathengi beMillionMakers.com, bayacetyiswa ukuba banxibelelane nathi kwaye / okanye bathathe iingcebiso ezifanelekileyo ngaphambi kokuzibophelela kuso nasiphi na isenzo okanye ukuthatha isigqibo malunga neenkonzo eziceliweyo.
Incorporate kunye neNsimbi yeeNkonzo zoLwakhiwo
Iinkonzo zokuNgenisa kunye ne-LLC zoQeqesho zibandakanya ukulungiswa kunye nokugcwaliswa kwamaxwebhu okwenziwa kwilizwe lakho, ngokusekwe kuphela kulwazi olunikezwe nguwe eku-odoleni inkonzo kwaye iya kungeniswa emngciphekweni wakho. Ukungenisa amaxwebhu enkampani kwinkampani kwilizwe lakho, ABAZIZIGIDI abayi kuqinisekisa okanye bazame ukuqinisekisa ukuba ulwazi olukwincwadi yamaxwebhu luchanekile, lufanelekile okanye luphelele. Ikwanoxanduva lwakho lokufumana kunye nokugcina imvume ngaphambi kokuchonga iarhente ebhalisiweyo / yokuhlala kwinkampani yakho. Ukongeza, asinaxanduva lokuqinisekisa ukuba zonke izinto ezibandakanyiweyo zikarhulumente okanye iimfuno zokwenziwa kwe-LLC zigqityiwe, kwaye asinaxanduva lokukucebisa okanye ukukhumbuza ngazo naziphi na iimfuno okanye uxanduva, kubandakanya, kodwa kungasikelwanga mda kulo naliphi na ilizwe elifunekayo okanye iifilitha zikaRhulumente, iingxelo zonyaka, irhafu efanele ukuhlawulwa. Ngaphaya koko, ngaphambi kokusebenzisa iinkonzo zethu, luxanduva lwakho kuphela ukukhetha iFom yeShishini kwishishini lakho (C-Corporation, S-Corporation, LLC, Partnership, Private Limited okanye limited).
Ukurhoxiswa koMyalelo weNkonzo
Ukuba nayiphi na i-odolo yeenkonzo zethu icinyiwe emva kokuba sifumene intlawulo, ke imali epheleleyo iya kubuyiswa ngaphandle komrhumo wokuhlawulwa kwe- $ 50.00. Nawuphi na umyalelo oqhubekekisiwe ngokungenakuhlawulwa uhlawulwa.
IZIBHENO ZOKUGQIBELA AYIYO IMOTO YAMALUNGU. IMILIYILI YOKUGQIBELA luphawu lokufayilisha kunye nenkampani yophando kuphela. Ulwazi olunikezwe kwi MillionMaker.com inikezelwa ngenjongo yolwazi ngokubanzi. Indawo yewebhu, MillionMaker.com, yeyakho kwaye iqhutywa yiMM LLC. Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, iMM LLC (kubandakanywa neenkonzo ezibonelelweyo nge MillionMaker.com) ayisiyiyo inkampani yomthetho, kwaye akukho nabaphi na abaqeshwa kwi-MILI YOKUGQIBELA ababambele njengegqwetha lakho, kwaye akukho kwimeko apho ulwazi olunikezwe kule ndawo okanye naluphi na unxibelelwano ngumqeshwa wabasebenzi be-MILLION MAKERS lubonwa njengengcebiso kwezomthetho. Ngapha koko, olu lwazi alwenzelwanga nto kwaye akufuneki lusebenze njengendawo yokufumana iingcebiso kwezomthetho. Kuba umthetho uhlala utshintsha, ulwazi kule ndawo alunakuqinisekiswa ukuba luchanekile, lugqibeleleyo okanye lwangoku. Kucetyiswa ukuba ubone igqwetha malunga neenkonzo zakho zokufudukela kwelinye ilizwe, iinkonzo zemfundo, ukumiselwa kweshishini, uphawu lwentengiso, iilayisensi zeshishini, ukubonisana ngemali, iinkonzo zepropathi, ishishini lokuthengisa, okanye ukuba unemibuzo ethile engafikeleleki kule ndawo okanye ukuba ufuna inqanaba eliphezulu lokuqinisekisa.
Izithintelo kuMonakaliso. Ukucingelwa ngeengozi. Iphepha elichazayo ukuba akaqinisekanga
IZIBHENO ZOKUGQIBELA azithwali xanduva lwawo nawuphi na umonakalo owenziwe nguwe, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iimpazamo, ukukhutshwa, ukulahleka kwedatha, ukulibazisa ekusebenzeni okanye ukuhambisa, ukungahambisi, ukucinywa kweefayile okanye i-imeyile, iimpazamo, iziphene, ikhompyuter intsholongwane, okanye ukuphazamiseka kwenkonzo ngalo naluphi na uhlobo, okanye nakuphi na ukusilela kokusebenza, ukusilela konxibelelwano, ubusela, ukutshatyalaliswa okanye ukufikelela okungagunyaziswanga kweerekhodi, inkqubo, ulwazi okanye iinkonzo. IZIBHENO ZOKUGQIBELA azithwali xanduva lomgangatho, ukuchaneka, okanye ukuchaneka kwedatha / lolwazi oluqokelelwe kusetyenziswa nayiphina inkonzo yethu. Ukusetyenziswa kolwazi oluqokelelwe ziinkonzo ZABADLALI BAKHO kusengozini yakho. Akukho ngcebiso yomlomo okanye ulwazi olubhaliweyo olunikezwe ngabenzi BOKUGQIBELA, abaqeshwa bayo, iiarhente, abanikezeli benkampani yesithathu, abaniki zinkampani, iilayisensi kunye nokunye okunjalo, kuyakwenza iwaranti okanye ilayisensi; kananjalo awuyi kuba nelungelo lokuxhomekeka kulwazi okanye kwingcebiso.
Uthatha uxanduva olupheleleyo kunye nomngcipheko ekusebenziseni kwakho iinkonzo ze-MILLION MAKERS. IZIBHENO ZESILUMKISO asiqinisekisi ukuchaneka okanye ukuphelela kolwazi ekulo iinkonzo zalo. Iinkonzo zabenzi benkonzo babonelela ngento "njengoko injalo", kwaye "ngokufumaneka". Kuluxanduva lwakho ukuphonononga ukuchaneka, ukugqibelela kunye nokusebenziseka kwalo lonke ulwazi kunye neziphumo zokukhangela ezibonelelwe kwiwebhusayithi yethu okanye ezenziwa ngomlomo ngabasebenzi bakaMILLION MAKERS.
Akukho zimvo okanye iiwaranti, ezichaziweyo okanye ezichaziweyo, zinikezelwa ngokubhekisele kwezomthetho okanye naziphi na ezinye iziphumo ezinokubangelwa kukusetyenziswa kweenkonzo zethu. Uxanduva lwabasebenzi abasebenza ngezigidi ezigidi ukusuka kwityala elibangelwa kukusetyenziswa kweenkonzo zethu lilinganiselwe kwinani elihlawulwe kwi-MARI YEMILILO yokusebenzisa olo hlobo. Onke amabango asemthethweni avela ekusetyenzisweni kweenkonzo zethu aya kuncitshiswa kwiinkundla zaseBelize
Kwimeko apho naliphi na izibonelelo zalo Mlahleko libanjiweyo ukuba linganyanzeliseki, loo malungiselelo aya kuncitshiswa okanye apheliswe ngokobuncinci obufunekayo ukuze esi siVumelwano siqhubeke sisebenza ngokupheleleyo.